Hollywood Vanity, Birao Solosaina, latabatra mitafy - Yifan
Mpantsaka 8 Mirror Hollywood Vanity Mirror miaraka amin'ny takamoa sy birao napetraka mainty Ity Hollywood Glam Set ity dia manana izay ilainao rehetra sy bebe kokoa. Ny fitaratra manazava sy vera ambony ambony manazava mba hampisehoana izay irin'ny fonao. Ny fitaratra dia mitazona jiro manjavozavo ary ny vatasarihana birao dia vita amin'ny bokotra fomba diamondra kanto. Ampiasao ny hakantony amin'ny toerana rehetra miaraka amin'ity endrika tsotra nefa mahavariana ity. Atsangano ao amin'ny efitranonao ho an'ny traikefa glam feno rehefa mametraka ny makiazy manokana ianao, miaraka amin'ny fanamorana stora feno ...
Zava-poana maoderina maoderina misy endrika miharihary ity, fitaratra fipetahana mifanentana, misy fanjairana miloko marevaka sy tongotra volamena tsy mahazatra. Ny tena tampon'ny marbra fotsy sy ny fitaratra boribory mifanentana dia mampiavaka ity zava-poana ity dia misongadina amin'ny ambiny. Ity sombin-javatra marobe ity dia hijery tsara ao amin'ny efitranonao. Zahao ireo sombin-tsika hafa avy amin'ity fanangonana ity raha te hijery miaraka. Ny fananganana metaly, marbra faux, hazo matevina ary hoditra PU dia miantoka fanohanana matanjaka, fampiasana maharitra ary traikefa fampiononana ...
Amin'izao fotoana izao, ny latabatra zava-poana dia mifaninana amina fanaka avo lenta momba ny vidiny. Tsy misy olona hisakana ny olona tsy hahazo raha mahay mandany zava-poana. Raha sendra mitady zava-poana ianao izao dia faly aho manondro safidy roa. Mividiana fitaratra amin'ny rindrina ary apetraho seza ary koa latabatra fisakafoanana kanto sy ahazoana aina. Izay no efa haharitra ny zava-poana amin'ny nofinofisinao. Faharoa, mividiana remover makiazy izay voafetra ny fitehirizana na mividy kaontenera plastika vitsivitsy ary ampiasao izany tog ...
Famaritana TSY. YF-D006 FIZARANA 4 Sariitatra, fantsom-panorona 1 STYLE TRANO FAMPIANARANA Melamine board TABLE DIMENSION 43.3 x 19.68 x 29.52 santimetatra dia manohana ny OEM izahay amin'ny haben'ny MIRROR INDRINDRA ENY ASSEMBLY Required WARRANTY 3 Taona voafetra (fonenana), 1 taona voafetra (varotra) avo lenta ny famitana ny tampon'ny fotsy dia singa tena ilaina amin'ny efitranon'ny tanora, birao an-trano, na aiza na aiza ilana sehatr'asa ilaina. Azonao atao koa ny mametraka an'io birao io ao amin'ny efitranonao, ...
Birao fandalinana manoratra maoderina miaraka amin'ny boo ...
Famaritana TSY. YF-D016 FIZARANA 1 vatasarihana, vata misy varavarana STYLE tabilao melamine MATERIAL amin'izao fotoana izao TABLE DIMENSION 120/140 / 160x60x75cm dia manohana ny OEM amin'ny haben'ny MIRROR INDRINDRA ENY ASSEMBLY Required WARRANTY 3 Taona voafetra (fonenana), 1 taona voafetra (ara-barotra) namboarina miaraka amin'ny raha tehirizina ao an-tsaina dia mamela anao hitazona filaminana sy fandaminana ao amin'ny biraonao. Manasongadina ny birao lalindalina kokoa, 50 / 60cm, ny kabinetra lalina dia mahatonga ny trano tonga lafatra ho an'ireo antontan-taratasy tsy miankina ireo ...
Birao informatika fianarana manoratra fotsy ho an'ny trano ...
Famaritana TSY. YF-CD006 FIZARANA 4 Drawer, boatin-tsolika 1 STYLE board ankehitriny melamine board TABLE DIMENSION 120x45x70cm dia manohana ny OEM amin'ny haben'ny MIRROR INDRINDRA ENY ASSEMBLY Required WARRANTY 3 Taona voafetra (fonenana), 1 taona voafetra (ara-barotra) misy talantalana 4 malalaka manome toerana malalaka hitahiry ny kojakoja any amin'ny birao, ny taratasy, ny fampirimana rakitra ary ny haingon-trano kely maro kokoa, Ny talantalana 4-ambaratonga dia azo apetraka mora eo amin'ny lafiny ankavia na ankavanana ...
YF-T10 Zava-bolo makiazy lehibe amin'ny talantalana fitehirizana ...
Famaritana TSY MISY YF-T10 FIOMPIANA Storage, Drawers, mirroring azo esorina STYLE Luxury & Modern MATERIAL High gloss MDF board + stainless steel tongotra TABLE DIMENSION 1200 * 500 * 750mm 1000 * 500 * 750mm izahay dia manohana ny OEM amin'ny haben'ny MIRROR INDRINDRA ENES ASSEMBLY Takina antoka 3 taona voafetra (trano), 1 Taona voafetra (ara-barotra) Vidiny EXW: US $ 0,5 - 9,999 / Piece (miresaka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa) Min.Order Quantity: 30Pieces Supply Supply: 10000 Piece / Pieces per Mon ...
Famaritana TSY. YF-T3 FIZARANA fitehirizana, vatasarihana, fitaratra ambony tampina STYLE Luxury & Modern MATERIAL High gloss MDF, Gold plating vy TABLE DIMENSION 900mmL x 400mmW x 750mmH 1000mmL x 400mmW x 750mmHwe manohana OEM ny haben'ny MIRROR INCLUDED YES ASSEMBLY Required WARRANTY 3 Year Limited (trano onenana), 1 Taona voafetra (ara-barotra) Vidiny EXW: US $ 0,5 - 9,999 / Piece (miresaka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa) Min.Order Quantity: 30Pieces Supply Supply: 10000 Piece / P ...
Famaritana TSY. YF-T2 FIZARANA fitehirizana, vatasarihana, LED Mirror STYLE Luxury & Modern MATERIAL High gloss MDF, Gold plating vy TABLE DIMENSION 800mmL x 400mmW x 750mmH 1000mmL x 400mmW x 750mmH 1200mmL x 400mmW x 750mmH dia manohana ny OEM amin'ny haben'ny MIRROR Tafiditra amin'ny ENSEMBLY YES Ilaina antoka 3 taona voafetra (fonenana), 1 taona voafetra (ara-barotra) Vidiny EXW: US $ 0,5 - 9,999 / Piece (miresaka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa) Min.Order Quantity: 30Pieces Supply ...
YF-H-802-2 Black Buffet latabatra 2 varavarana & 3 ...
Famaritana TSY MISY YF-H-802-2 FIZARANA talantalana, vatasarihana, varavarana STYLE Luxury & Modern MATERIAL High Gloss MDF board + fitaratra antonta + vy tsy misy fangarony TABLE DIMENSION 1200 / 1500mmL * 400mmW * 850mmH dia manohana ny OEM amin'ny haben'ny MIRROR INCLUDED ENY ASSEMBLY takiana WARRANTY 3 Taona voafetra (fonenana), 1 taona voafetra (ara-barotra) Vidiny EXW: US $ 0,5 - 9,999 / Piece (miresaka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa) Min.Order Quantity: 30Pieces Supply Supply: 10000 Piece / Pieces per ...
Mifanaraka amin'ny anarany, ny latabatra kafe misy aingam-panahy tamin'ny tapaky ny taonjato dia manasongadina tampon-tampon-kavoana hanehoana toerana fitahirizana miafina. Ny famaranana ny varimbazaha dia ampamenoin'ny ravina marbra ho an'ny fitoeram-panangonana fanampiny - mety tsara amin'ny fitehirizana boky mandritra ny fiarahan-dry zareo manaraka. Ny latabatra kafe fitehirizana ambony dia manome fomba sy fitehirizana be dia be ho an'ny toeram-ponenanao ankehitriny. Ny fifangaroan'ny singa maloto dia manampy ny hafanana ary koa ny fomba manja amin'ny haingon-trano ao amin'ny efitranonao sy ny voamadinika ...
YF-H-901 TV Stand 3-Drawer Media Stand miaraka Gol ...
Famaritana TSY MISY YF-H-901 FIZARANA Misy sarisary ao anatiny, Fampirimana misokatra, fitantanana tariby STYLE Luxury & Modern MATERIAL High Gloss MDF board + fitaratra antonony TABLE DIMENSION 1830/2030 / 2230mmL * 400mmW * 420mmH + 1230 / 1360mmL * 600 / 700mmW * 400mmHwe manohana OEM ny haben'ny MIRROR INDRINDRA NY ASSEMBLY Ilaina fiantohana 3 taona voafetra (trano), 1 taona voafetra (ara-barotra) vidiny EXW: US $ 0,5 - 9,999 / Piece (miresaka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa) Min.Order Quantity: 30Pieces Suppl ...
YF-H-211 Volomparasy mavokely dia mahatakatra kisarisary 2 hazo ...
Famaritana TSY MISY YF-H-211 FIZARANA fitehirizana, vatasarihana STYLE multifunctional & Modern MATERIAL High gloss MDF board + Vvett + tongotra tsy misy fangarony TABLE DIMENSION 400mmL x 400mmW x 500mmHwe manohana OEM ny haben'ny MIRROR INCLUDED YES ASSEMBLY Required WARRANTY 3 Year Limited (fonenana) , 1 Taona voafetra (ara-barotra) Vidiny EXW: US $ 0,5 - 9,999 / Piece (miresaka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa) Min.Order Quantity: 30Pieces Supply Supply: 10000 Piece / Pieces isam-bolana Port: Tianj ...
Famaritana TSY MISY YF-H-206 FIZARANA fitehirizana, vatasarihana, fitaratra antonony STYLE multifunctional & Modern MATERIAL High gloss MDF board + Stainless steel leg TABLE DIMENSION 420mmL x 420mmW x 420mmH 500mmL x 400mmW x 500mmHwe manohana OEM amin'ny haben'ny MIRROR tafiditra ao anatin'ny fangatahana takiana 3 Taona voafetra (fonenana), 1 taona voafetra (ara-barotra) Vidiny EXW: US $ 0,5 - 9,999 / Piece (miresaka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa) Min.Order Quantity: 30Pieces Supply Supply: 10000 Pi ...
Famaritana TSY MISY YF-H-201 FIZARANA fitehirizana, vatasarihana, fitaratra antonony STYLE multifunctional & Modern MATERIAL High gloss MDF board + Stainless steel leg ), 1 Taona voafetra (ara-barotra) Vidiny EXW: US $ 0,5 - 9,999 / Piece (miresaka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa) Min.Order Quantity: 30Pieces Supply Supply: 10000 Piece / Pieces isam-bolana Port ...
Ny vokatray dia novokarina niaraka tamin'ny akora tsara indrindra. Isaky ny fotoana dia manatsara ny programa famokarana tsy tapaka izahay.
Ny vokatrao dia manana endrika bika aman'endrika, fahaiza-miasa tsara ary kalitao avo lenta.
vidiny mirary, serivisy aorian'ny varotra mahafa-po, miarahaba anao koa izahay hitsidika ny ozinina amin'ny fotoana tianao.
Ny Sideboard Sideboards dia mety tonga amina karazana fomba maro karazana miaraka amin'ny endri-javatra maro samihafa. Ny sisin-tany maoderina dia matetika manintona ary mety manana tongotra somary lava kokoa noho ny sideboard nentim-paharazana. Rehefa apetraka ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, ny sideboards dia afaka miasa ho ivon'ny fialamboly. Noho ny l ...
Ny marina momba ny latabatra kafe sy ny antony ilainao iray
Manontany foana izahay, ary ny iray amin'ireo fahita matetika dia ny hoe mila latabatra kafe ve ianao. Anontanio izay mpamorona ao anatiny fa holazain'izy ireo aminao, mihetsika trompetra amin'ny tranga rehetra. Maninona no mamorona efitrano tsara tarehy raha tsy ampiasainao mihitsy? Izany no antony maha-zava-dehibe ny fametrahana ny fomba hampiasanao ny s ...
Amin'ny lafiny maro, ny efitrano fatoriana no efitrano ilaina indrindra amin'ny trano rehetra. Manampy anao hiala sasatra sy hamelombelona izany aorian'ny andro lava, ary ny famolavolana ny efitranonao dia tokony hanana tanjona hananganana tontolo mety handrisihana ny torimaso. Ny fampiasam-bola amin'ny fanaka mety dia afaka manampy anao hahatratra izany ary hampiroborobo ny kalitao ...
Hebei Yifan Wood Industry dia miorina ao Quyangqiao, Zhengding County, mirefy 6.600 metatra toradroa. Alohan'ny hanombohantsika ny orinasa iraisam-pirenena, ny zava-bita lehibe dia vita teo amin'ny sehatry ny varotra any Shina Ny orinasa dia manana fitaovana famokarana, tsofa fanodinana elektronika, fanodinana enina enina mandeha ho azy, milina fanaovana fehikibo mandeha ho azy nohafarana avy any Alemana sy fitaovana lehibe hafa . Manaraka ny politikam-pirenena miaro ny tontolo iainana izahay ary manana fomba fivoahan'ny maloto. Tamin'ny volana aogositra 2019, dia nitarina ny faritry ny orinasa, ary tonga lafatra indray ireo fitaovana.
Mifantoka amin'ny fanomezana serivisy ho an'ny mpanjifanay izahay ...
Ny kalitao no voalohany, ny teknolojia dia fototra
Nametraka rafitra fifehezana kalitao hentitra izahay.